OroMaraa Sanyii Haaraan Maaliif Akka Amboo Irratti Dhalatu Barbaachisaa Tahe? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOroMaraa Sanyii Haaraan Maaliif Akka Amboo Irratti Dhalatu Barbaachisaa Tahe?
Damee Boruu tiin, Ebla 23, 2019
Bara 1991 waraanni TPLF guyyaatti kilometira 120 deemaa ittisa tokko malee Shagar galuuf yaroo fiigaa jiru Oromoon Ambo gamtaan bahee gotummaa guddaan dura dhaabbate. Waraanni Dargii qawwee harcaase lubbuu isaa baafachuuf baqaachaa ture. Warri akka Shalqaa Dawit Waldegoorgis har’a Uummata Oromoo deebisanii garboofachuuf caccabaa jiranii warra gaafas biyya gadhiisanii baqatanii badan har’a biyya ilmaan Orommoo kumaatamaan itti wareegamtee bilisa baafte qircachuuf wal caccabsaa jiru. Amboo gara galgalaa lafatu gagalagalaan seenaa boonsaa qaba.
Bara Mootummaa Malasaa maqaan Amboo abaarsaa fi tuffiin qofa waamama. Aariin didaa Amboo utuu garaa isa gubaa jiru Malasaa Zenawii du’ee hobaafate. Sab boonummaa fi haamilee Oromoo Amboo cabsuuf Oromoo Kabjamaa fi jaalatamaa Obbo Daraaraa Kafanee ajjeessuudhan OPDOn qormaata guddaa Orommo Amboof eegalte. Didaan Uummataa Amboo dhiiga Obbo Daraaran ni daraaree ol guddate malee of duuba hin deebine. Obbo Daraara kan ajjeesse Abbaa Dulaa Gammadaa akka tahe yaroo sana odessamaa ture.
Sana boodas ilmaan Amboo hidhuu fi ajjeessan hojii OPDO isa filmaata hin qabne. Jagamaa Badhanee fi Kabadaa Badhaanee (9 Nov. 2005) Amboo gubaa irratti ajjeessuun qabsoo Qeerroo Bilisummaa biqilche. Qarree fi Qeerroon Oromoo kara qindaa’ee fi ijaarameen qabsooo bilisummaa Oromiyaa guutuu keessatti sochoosuuf balbala saaqe. Qaanqeen qabsoo Ginchi gubaa irratti qabatte Fincila Diddaa Garbummaa qabsisuudhaan yaroo gabaaba keessatti duuchaa Oromiyaa waliin geese. Waraanni Wayyaanee fi OPDOn ilmaan Ormoo hidhuu, ajjeessuu, qaama irraa hir’isuu, gudeeduu fi salphisuun waan qabsoon dhaabbatu itti fakkaatee ture.Uummatni Oromoo irree tokkoon ka’ee gaafa diina dura dhaabbatu utuu rasaasa tokko hin dhukaasiin waraana Wayyaanee of irraa buqqisee darbe. Hoogganoota OPDO keessa warra akka Obbo Lamaa Magrsaa waan sab boonummaa Oromoo qabanii uummatni Oromoo emaana aangoo biyya bulchuu dabarsee isaanii kenne. Hammeenyaa fi badii OPDOn Uummata Oromoo irraan gahaa turte dagatee utuu hin taane dhiifa godheef akka mootummaa uummata gara fuula duraa tarkaanfachiisan itti dhiisee ilaalaa jira.
Uummatni Amboo qananii fi qaroo ilmaan isaa hedduu aarsa kennee jira. Oromoon Amboo sab boonummaa fi eenyummaa isaa irratti humna kamiif iyyuu uummata jilbeefatu miti. Goyyaa Gootota Oromoo biyya keesatti yaroo duraa 04/15/2019 bakkaa maatiin warra wareegamanii fi qabsawwan Oromoo jiranitti akka kabajamu godhuun Amboon biyya gootota akka taate diinaa fi fira agarssisee jira.
Kan baayyee nama dhibu guyyaa shan booda Sanyiin haaraan kan diqaalota Habashaa ammatu maaliif Amboo keessatti akka dhalatu barbaachisaa tahe? Kun tooftaa haaraa sab boonumaa Oromoo Amboo xureesuu fi booressuuf kan xiyyeefate tahuu isaa caalaa haamilee Uummata Oromoo xuqquuf akka yaadame ifa jira. Namni nu jibba jenne dhugaa fi seenaa yoo dhoksinee dhalloota boruuf seenaa jalaa fi dubbii dharaa dabrsinee darbuuf teenyaa. Kanafuu dhugaa agarruu dubbachuu qabna.
OPDOn diqaalto Habashaan dhunfatamtee jirti. Warri Oromummaa isaanii irratti guyyaa tokko hin waakkanne Obbo Lamaagrsaa fi Addee Xayyiba Hasan bulchinsa Oromiyaa keessaa fonqolchaan bahanii jiru. Obbo Lammaan kononeel Abiyi wajjin kan gargar isa baasu du’a qofaa jedhee ture. Yuudaanii iyyuu qarshii sodomaaf ilmaa jedhee ilma Waaqaa Jesuus Christoos gurguratee jira. Namni dheebuu aangoo qabu utuu guyyaa lama hin buliin nama gana. Kononeel Abiyi namni gaaf tokko an Oromoo jedhee hin beekine diqaalota Habashaa ijaaree OPDO dhunfatee jira. OPDO dhunfachuu irra darbanii sab boonummaa uummata Oromoo balleessuuf warra Amhaaraa wajjin marxifatanii haqa uummata Oromoo fi mirga uummata Oromoo dabsuuf hojjechaa jiru.
Dhugaan dubba dha jedheen jira. Dubartoonni Habashaa mana dhugatii keessatti of gurguranii jiraachuun aadaa isaanii ti. Gaafa an beeku aadaan kun akka aadaa Oromoo keessa hin jirre morma koon kena.Yoo tokkoo fi lama argaman warra baadiyaa irraa bade magaala galee bakka seenan dhabanitu mana dhugaatii keessa hojjeta. Dubartoonni Habashaa gaafa mucaa qabatan nama jireenya qabu tokko filatanii mucaa siif qabadheen jira jedhanii dhukaa galu. Abbaan foonii eenyu akka tahe kan beeku Waaqa duwwaa dha. Haatuu hin beektu. Yaroo tokkotti dhiira baayyee wajjin waan ciiftuuf jecha. Dubartonni kun fudhamanii baatii torbaa fi sadeetti keessatti mucaa dha’u.
Ijoolleen bifa kanaan dhalatan hamileen isaanii kufaa fi of irratti amantii guddaa hin qabane tahanii guddatu. Keessattu yaroo sab boonummaan guddachaa dhufu gara kamitti akka makaman rakkatu. Kanaafuu yoo danda’an sab boonummaan tasuma akka badu gochuun hawwii isaanii keessa isa duraa taha. Hiitilar nama cinqii eenyummaa (identity crisis) qabu keessa tokko jedhama. Warri kun gaaffa aangoo guddaa argatan hawwaasa baayyee midhu. OroMaraan Sanyii haaraa diqaalto Habashaa uumamee Kononeel Abiyiin dursamu akka tahe dagatamuu hin qabu. Akeekni isaa ifa jira. Abbaa irree tahuuf uummata kana lamaan waliitti cafaqee humna tokko ijaarachuuf yaaluu dha. Garuu warri ergaa isaa baatanii deeman warra akka Tayyee Dandaa, Addisuu Aragaa, Alamuu Simee, Milkeessa Midagaa w.k.f. warra akeeka isaa gufachiisu malee warra galmaan gahan miti(wrong meesagers).
Uummatni Amhaara uummata seenaa, afaan, aadaa isaa fi eenyummaa isaa irratti boonu. Waan Addisu Aragaa OroMaraa irrti alba’aa jiru isaaniifuu fudhata hin qabu. Amhaarri kootuu biyyaa Oromoo fudhadhu jedhamee sababni diduuf hin jiru. Kan isaanii dura dabarsanii aboomatanii jiru. Kan Oromoo fudhachuuf bololi’uu waan ifatti argaa jirru. Waan seenaa, afaan, aadaa fi dhuuda Oromoo ilaalu Addisuun yaroo haasa’u warra taa’ee isa dageefatuuf qaanii(fiasco) guddaa dha. Akkuma harroon Shagar mukaa fi ciddii gura ishee olitti fe’amtee deemtu Addisuu Araggaa soba mana inni keessa jiru caalu baatee dhaabbatee haasa’a. OPDOn uummata gowwomsuuf jettee of gowwomsaa jirti. Abbaan irrummaa Wayyaaneefuu hin hojjeenne. Uummata Oromoo akkasi dammaqee, ijaaramee jiru OPDOn gowwomsitee yoo garbummaa jalatti deebifte kufiifte karaa koo boohuf miti hidhii koo illee hin xuuxxuuf.
Shirri OPDOn bixxilaa oltu jalli isaa gubataa irri isaa bukkataa dha. WBO rukkutuu fi Uummata irratti kaasuuf jettee kan baankii cabsaa fi saamaa turte OPDO akka tahe B. J. Kamal Galchuu saaxila baase. Uummatni Oromoo waan ishee irraa hin fudhanne waan beektuuf midiyaa Habashaa warra akka Esat dabrsitee akka amma guyyaa har’a olola WBO irratti ofan gochaa jirti. Homaa miti. Hattuu fi sobduun booda naati jedhu. Kononeel Abiyi Masaraa Minilki seenuun Finiclaa Xumuraa Garbummaa akka gatatu gochuuf ture. OromAraan akka Amboo irratti margu yaaluun Finclli Xummura Garbummaa akka dhalatee hida garbummaa Oromiyaa keessaaa buqqisee darbu ayyaana gaarii nuu fide.
Cittoo irratti Fanxoo Damee Boruutin, Caamsaa 28, 2018 Waan baayyee nama dhibuu fi hiikaa hin…
Haal duree dhimma araaraa ABO fi Mootummaa Itoophiyaa irratti ajajni WBO Z/K dhiyeessee akka asii…